Sidee baan ku ogaan karaa ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee Amazon?
Dejinta diiradda saxda ah iyo bartilmaameedka ugu muhiimsan ee faa'iidooyinka ugu fiican ee Amazon waa malaha ugu muhiimsan ee ganacsiga oo dhan. Waxyaabahani waa in cilmi-baaris caan ah oo qotodheer ay tahay dhab ahaan waxa saameyn toos ah ku leh iibkaaga. Si fudud sababtoo ah macaamiish kasta oo suurtagal ah ayaa kaliya riixi kara oo iibsan kara adiga - haddii alaabtaadu ay ka muuqato meesha ugu sareysa ee raadinta dukaamada. Hase yeeshee, micnaheedu waa in aad ku gudbi doontaa cilmi-baaris ballaaran oo cilmi-baaris ah oo ficil-celin inta badan ah kuwan soo socda:
Si cad u fahmida alqaacida raadinta A9 ee loo isticmaalo nidaamka rikoodhka liiska Amazon
Ogow sida loo ogaado fursadaha cusub iyo keywords qarsoodi ah Amazon
Isticmaal mugga raadinta bishiiba si loo go'aamiyo loona kala sooco ereyada ugu muhiimsan ee raadinta
Falanqaynta iyo sii baadha su'aalaha dheeraadka ah ee wax soo saarka ee isticmaala dukaamada iibsanaya online
Focus on more on keywords kelsiyada gaarka ah ee Amazon Sales Central (a). k. a.
Oo aynu dib u wajahno mar kale - haddii ay dhacdo natiijooyinkaaga ku qanacsan in meel laga helo laba ama saddex bog oo ugu horreeya liiska Amazon ee SERPs, waa inaad si degdeg ah u xallisaa kuwa si gaar ah loogu beegsanayo raadinta weydiimo si ay ugu adeegaan ujeeddadaada muhiimka ah. Habkaa, halkan waa tallaabo kooban oo tilmaan-bixin talaabo ah si aad u maamusho ereyada ugu muhiimsan ee keydka ah ee Amazon soo saarida wax soo saarka toosinta habka saxda ah.
Tallaabada Koowaad: Ka Qayb Qaadista Macluumaadka
Ha u jihaysnin waqtigaaga iyo dadaalkaaga barashada waxyaabaha aad ujeeddooyinkaaga / faa'iidooyinkaaga si aad u dhamaystirto fahamkiisa dhinacyada waaweyn ee waxqabadka iyo isticmaalka maalinlaha ah. Waxay u egtahay mid aan maskaxda lahayn, laakiin waa xariiq dhab ah, sababtoo ah maqnaansho kasta oo xitaa ama xitaa faahfaahinta tani waxay horseedi kartaa in la tirtiro qayb caddaalad ah oo macaamiisha ah. Si kale haddii loo dhigo, iska dhig inaad kabaha u iibsatid, oo si dhow ula soco natiijooyinka ugu muhiimsan ee loo adeegsado tartamayaashaada / qaybaha tartanka. Liiska Labaad: Nidaamka Nadiifinta & Nadiifinta Nadiifinta
Halkan waa markii ugu dambeyntii la soo qaato qalab cilmi-baaris oo muhiim ah ama bogga internetka oo si gaar ah loogu talagalay qaabeynta liiska ugu muhiimsan ee ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay Amazon. Habkaa, ha iloobin in Amazon ay weydiistaan ​​weydiimaha baabuurta iyo wadashaqeynta sare ee raadinta ay sidoo kale faa'iido leh. Iyo inaad hubiso in aad mudnaanta liistadaada ku salayso mugga raadinta, heerka qiyaasta tartanka, iyo iibsiga ujeedada.
Tallaabada Saddexaad: Dheecaan Shuruudaha Raadinta Muddada-dheer
Hadda waa waqtigii ugu dambeyntii lagu baaro liiska warbixinta muhiimka ah ee shuruudaha dukaameysiga dheeraadka ah si aad uga dhigto inay si ka sii fiican u bartilmaameedsanayaan. Xusuusnow, kan sare waa mugga raadinta ee eray gaar ah, way ka sii adag tahay inuu noqdo darajo. Taasi waa sababta aad u soo qaadayso gaadiidka sare iyo sidaas darteed xaddiga isbedelka kordhinta, waa inaad kala soocdaa shuruudaha raadinta oo aad tirtirtaa kuwa leh heer jimicsi xad dhaaf ah. Ku haay tartanka ugu muhiimsan ee ereyada dhaadheer ee dheer - oo aad samaysay Source .